यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा कडा कानुन भएका १० राष्ट्र | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा कडा कानुन भएका १० राष्ट्र
लागुपदार्थको उत्पादन, तस्करी, बिक्रि वितरण र सेवन रोक्नको लागि कडा कानुन बनाइ पनि यस्ता आपराधिक घटनाहरु भने कम हुन सकेका छैनन् ।
आउनुहोस् हेरौ विश्वको सबैभन्दा कडा कानुन भएका देशहरु
जापानको कानुनलाई धेरै कडा मानिन्छ । यहाँको ड्रग सम्बन्धि कानुन त झनै कडा रहेको छ । यहाँ ६८ किसिमका ड्रगहरुको उत्पादन र बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्विडेनले पहिले ‘मेथाफेटामाइन’ डाक्टरको सिफारिसमा प्रयोग गर्न दिन्थ्यो तर, त्यसको दुरुपयोग भएपछि उक्त ड्रगलाइ अवैध घोषणा गरिएको थियो । अहिले त्यसको सेवन गर्ने र तस्करी गर्नेहरुलाई कडा सजाय दिने कडा कानुन ल्याएको छ ।
भियतनामको लागुपदार्थ दुव्र्यसनीहरुलाई कारबाहि गर्ने अलग्गै तरिका छ । यो देशमा दुव्र्यसनीहरुलाई सरकारले सञ्चालन गरेको पुर्नस्थापना केन्द्रमा पठाइन्छ जहाँ उनीहरुलाई उपचारको साटो कडा अनुशासनमा र शारिरिक यातना दिइन्छ तथा निशुल्क श्रम गर्न लगाइन्छ ।
७. युनाईटेड अरब इमिरेट्स
लागुपदार्थको सेवन गर्नेहरुलाई कडा कारवाहि गर्ने देशको रुपमा युएईलाई पनि चिनिन्छ । युएईको कानुन अनुसार अवैध मानिएको डगहरुको कारोवार गर्ने, सेवन गर्ने र तस्करी गर्नेलाई कडा सजाँय दिइन्छ ।
वर्षमा करिब ५०० जनालाई मृत्युदण्ड दिने चिनले लागुपदार्थको सेवन र कारोबार गर्नेलाई समेत कडा कारवाहि गर्छ । लागुपर्दाथको बिक्रि वितरण, उत्पादन गर्नेलाई आजिवन कारावासको साथै मृत्युदण्ड समेत हुन सक्छ ।
५. साउदी अरब
यो इस्लामिक देश कानुनको मामलामा धेरै कडा छ । मदिरालाई समेत अवैध मानिएको यो देशमा अन्य प्रतिबन्धित लागुपदार्थको सेवन, कारोबार गर्नु भनेको धेरै ठूलो अपराध मानिन्छ । हत्यारा र बलात्कारीलाई जस्तै लागुपदार्थ तस्करी गर्नेलाई सार्वजनिक ठाँउमा मृत्युदण्ड दिइन्छ ।
यदी तपाई मृत्युदण्डलाई डरलाग्दो सजाँय मान्नुहुन्छ भने तपाईलाई इन्डोनेसियाको लागुपदार्थ सम्बन्धि सजाँयको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । इन्डोनेसियामा लागुपदार्थ कारोबार गर्नेलाई सजाँय दिनको लागि फाइरिङ स्क्वाडको नै प्रयोग गरिन्छ ।
यो इस्लामिक देशमा लागुपदार्थको तस्करी गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । यो देश आफ्नो कानुन पालना गर्नमा यति प्रतिबद्ध छ कि गएको केही दशकमा मात्रै यस देशमा १० हजार लागुपदार्थ दुव्र्यसनी र तस्करहरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
मलेसिया लागुपदार्थको नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनेमा छिमेकी देश सिङ्गापुर भन्दा कम छैन । यस देशमा ७ औंस भन्दा बढि गाँजा वा आधा औंस हेरोइन साथमा भेटीयो भटिएमा मृत्युदण्ड दिइन्छ ।
सिङ्गापूर आफ्नो कडा कानुनको लागि संसारभर प्रख्यात छ । सानो हुलदंगा गर्नेले त धेरै पछुताउन पर्ने यो देशमा लागुपदार्थ साथमा भेटियो भने त मृत्युदण्ड नै हुन्छ । कम्तिमा १७ औंस गाँजा वा आधा औंस कोकेन वा हेरोइन साथमा भेटियो भने उक्त व्यक्ति तस्कर मानिन्छ । सिङ्गापूरमा सन् १९९१ देखी २००४ को बिचमा ४ सय जना लागुपदार्थ तस्करहरुलाई फाँसीको सजाँय दिइएको थियो ।